Voageja ao amin'ny Twitter ve ny fiarovana ny kaontiko? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Voasimba ao amin'ny twitter ve ny fiarovana ny kaontiko?
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 748
Ny mpampiasa Twitter dia afaka manamarina raha ny Security ny azy Ny kaonty dia efa nifampiraharaha, rehefa mandinika izao manaraka izao: Mahita Tweet tampoka navoakan'ny kaontinao ianao, mahatsikaritra ireo hafatra mivantana tsy voaomana nalefa avy amin'ny kaontinao.
Ilay mpampiasa mahita hetsika namboarina tamin'ny kaontinao: Ahoana ny fanarahana, fanesorana, fanakanana sns. mahazo fampandrenesana avy amin'ny Twitter ianao milaza fa mety ho voafehy ny fiarovana ny kaontinao, niova ny fampahalalana momba ny kaontinao ary tsy izy no nanova azy.
Tsapan'ilay Mpampiasa fa azy ny tsy mandeha intsony ny teny miafina ary, ny sehatra Twitter, mangataka anao hamerina azy io. Amin'io lafiny io, ny mpampiasa dia mila fomba Twitter hamenoana ny kaontiny sy hiarovana azy.
Fomba ahazoana mamerina ny fiarovana ny kaontiko Twitter
Ireo dingana tsy maintsy harahin'ny Mpampiasa Twitter Avereno ny filaminana amin'ny kaonty Twitter anao: ovao avy hatrany ny teny miafinao, mangataha famerenana teny miafina ao amin'ny sehatra Twitter.
Ny mpampiasa dia tsy maintsy miantoka ny azy adiresy mailaka Matokia fa azonao atao ny manova azy amin'ny fampiharana Twitter iOS na Android na miditra amin'ny twitter.com; override ny fifandraisana amin'ny fampiharana antoko fahatelo izay tsy fantatrao.
Ho fanampin'izay, ny Mpampiasa dia tsy maintsy havaozy ny teny miafinao amin'ny fangatahana antoko fahatelo atokisanao; satria ny kaontinao dia iharan'ny fanakanana vonjimaika eo amin'ny sehatra Twitter vokatry ny fanandramana fidirana tsy nahomby.
TATITRA fanararaotana amin'ny TWITTER
Ao amin'ny tambajotra sosialy dia misy indraindray fihetsika izay ivelan'ny Fitsipika sy Politikan'ny Twitter, izay lasa manelingelina ary misy fiatraikany amin'ny resaka virtoaly misy eo amin'ny Twitter. Ireo toetra ireo dia tsy voatery ho tranga fanararaotana.
Raha mahazo hafatra mivantana ny mpampiasa Twitter na Serasera be loatra amin'ny kaonty mpanararaotra, azonao atao izao manaraka izao: Atsaharo ny fanarahana azy ary atsaharo ny karazana fifandraisana amin'ny kaonty voatondro; amin'ity fomba ity, hoy ny kaonty dia ho very liana rehefa tsy raisina mihitsy.
Raha ny fihetsiky ny Kaonty mpanararaotra mitohy, ny mpampiasa dia soso-kevitra hanakana azy io, ka hanakana azy ireo tsy hanaraka anao, na hahita ny sarinao amin'ny mombamomba anao eo amin'ny pejin'ny piraofilinao na eo amin'ny fizotranao Amin'ity fomba ity, ny valinteninao na ny fanononana anao dia tsy hiseho ao amin'ny takelaka fampandrenesanao.
Mahazo fandrahonana ao amin'ny Twitter aho
Ao amin'ny tambajotra sosialy Twitter dia mitranga kely amin'ny zava-drehetra, satria miovaova be izy ireo Ny isan'ny mpampiasa manerantany miaraka amin'ny fihetsika sy fihetsika samy hafa izay mety hisy fiatraikany amin'ny lafy tsaran-javatra na amin'ny lafiny ratsy, amin'ny fahalemen'ny olona mandalo amin'ny Twitter.
Ny Mpampiasa raha nahazo fandrahonana na inona na inona karazany ary heverinao fa tandindomin-doza ny fahamendrehanao ara-batana, dia tokony hifandray amin'ny Departemantan'ny polisy ianao; amin'ity tranga ity: Soraty ireo hafatra mampijaly na mahery setra izay niainanao nandritra ny fotoana nijanonanao tao amin'ny tambajotra Twitter.
Zava-dehibe ny mpampiasa famatsiana ny tontolon-kevitra rehetra mety hitranga manoloana ireo ahiahiana mety ho naneho fihetsika tafahoatra tamin'ny tambajotra sosialy hafa; koa manome vaovao mifandraika amin'ny fandrahonana voaray teo aloha.
1 Fomba ahazoana mamerina ny fiarovana ny kaontiko Twitter
2 TATITRA fanararaotana amin'ny TWITTER
3 Mahazo fandrahonana ao amin'ny Twitter aho
Ahoana ny fomba fandraisam-peo amin'ny twitter?
Ahoana no hamahana ny olako amin'ny twitter?